UPDATE: Puntland oo faah-faahin ka bixisay sababta ay u xirtay xafiisyo ay furteen Wasiirro ka tirsan DF Somaliya. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Puntland oo faah-faahin ka bixisay sababta ay u xirtay xafiisyo ay...
UPDATE: Puntland oo faah-faahin ka bixisay sababta ay u xirtay xafiisyo ay furteen Wasiirro ka tirsan DF Somaliya.
Garoowe (Halqaran.com) – Maamulka Puntland ayaa waxay faah faahin ka bixiyey sababaha ka dambeeya inay xiraan Xafiisyo ay deegaannada Dhahar iyo Goldogob ka furteen Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Wasiirrada Xafiisyada la amray in laga xiro ee deegaannada Puntland ka furtay ayaa waxaa ay kala yihiin Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xildhibaan Sadiiq Warfaa oo sanadkii 2017 furtay iyo Wasiirka qorsheynta Somalia Jamaal Maxamed Xasan oo Maalin ka hor furtay.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha gudaha Puntland Maxamed Musadaq ayaa sheegay in Puntland aysan joojin xafiisyo horumarineed in laga furto deegaannada Maamulka puntland.
Hayeeshee uu sheegay in Xafiisyada ay joojiyeen furitaankooda ay ahaayeen kuwa laga lahaa dano siyaasadeed, isla markaana marnaba aysan aqbaleyn arrimahaas iyo kuwo kale.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Puntland ayaa war ay xalay soo saartay waxaa ay ku mamnuucday in xafiisyo ay ka furtaan deegaannada Maamulkaas urrurada iyo shaqsiyaadka dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan.
ay u xirtay
xafiisyo wasiiro ka tirsan dowladda Somaliya